Soo dejisan Nmap 7.80 – Vessoft
WindowsShabakadKormeerka & FalanqayntaNmap
Qeybta: Kormeerka & Falanqaynta
Bogga rasmiga ah: Nmap
Nmap – software awood leh cilmi ilaalinta shabakadaha computer. Nmap taageertaa noocyada kala duwan ee baaritaano, sida TCP, UDP, syn, ICMP, fin, wakiil FTP, ACK iwm software ayaa kuu ogolaanaya in aad baarista dekedaha iyo kormeero ammaanka shabakadda xajmi kasta adayga. Nmap awood u inay is barbar dhigaan natiijada baaritaanada iyo codsan filtarrada martida loo yahay. Software waxay leedahay interface saaxiibtinimo oo kuu ogolaanaya inaad si ay u maareeyaan isticmaalaya line amarka.
Ilaalinta shabakadaha computer
Taageerada noocyada kala duwan ee scan
Maamulka adigoo isticmaalaya line amarkii
Isbarbar dhigga ee natiijada iskaanka ah
English, Français, Deutsch, Português (do Brasil)...
Soo dejisan Nmap
Faallo ku saabsan Nmap
Nmap Xirfadaha la xiriira
Homedale – waa aalad lagu falanqeeyo dhibcaha marinka wirelesska lagana qaado ficillo qaarkood si loo xaliyo calaamadaha daciifka ah ee ka imanaya meelaha Wi-Fi ama WLAN.
Qalab ayaa waxa u ku imtixaamaa xiriir network iyo codsiyada. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan hab maamuuska ee heerarka kala duwan.
LoriotPro – software badan ayaa awood u leh inuu la socdo qalab badan oo ku xiran shabakadda oo u wargeli isticmaalaha xaaladaha ku saabsan xaaladaha khatarta ah xilli hore.
qalab ee ay gacanta ku fog ee kombiyuutarada oo ku xiran yihiin Internet-ka. Waxa kale oo jira waa wax macquul ah ee call video ah iyo is-dhaafsiga ee files.
Freegate – waa aalad siisa marin ku gala goobaha xanniban. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu ka gudbo xannibaadda faafreebka isagoo abuuraya xiriirka iyada oo loo marayo server wakiil wakiil gaar ah.
Hamachi – softiweer si loo abuuro shabakad khaas ah oo khaas ah oo u dhaxaysa kombuyuutarrada internetka. Algorithms-ka qarsoon ee kala duwan ayaa loo adeegsadaa joogitaanka la ilaaliyo ee shabakada maxalliga ah.
qalab The in loo maqli karo ee multimedia iyo content interactive ee internet-ka. software The aad buu u yahay ballaarinaya fursadaha ka mid ah daalacashada caanka ah.
Agabka in uu ordo software ee deegaanka hal mar la taaban karin. Software wuxuu ka hortagaa keydinta xogta ku saabsan shaqada ee codsiyada orodka ee kaydinta macluumaad kasta.
AIDA64 Extreme – waa qalab lagu tijaabiyo laguna falanqeeyo awoodaha nidaamka. Software-ka ayaa soo bandhigaya macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan qalabka kombiyuutarkaaga.